छोरीलाई ब’ला’त्कारपछि ग’र्भप’तन गराउने बाउकाे यस्तो हविगत!! – PathivaraOnline
Home > समाज > छोरीलाई ब’ला’त्कारपछि ग’र्भप’तन गराउने बाउकाे यस्तो हविगत!!
admin October 11, 2020 October 11, 2020 समाज	0
सर्लाही । आफ्नी छोरीलाई ब’ला’त्कार गरेको अभियोगमा बरथहवाका ४० वर्षीय बाबुलाई अदालतले जन्मकै’दको फैसला गरेको छ । आफ्नी १३ वर्षीया छोरीलाई पटक–पटक ब’ला’त्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)ले जन्म कै’दको फैसला गरेको हो । छोरीलाई पटक–पटक ब’ला’त्कार गरेको भन्दै उनीविरुद्ध एक वर्षअघि प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस***
ब’ला’त्कारपछि छोरी गर्भवती भएको र ग’र्भप’तन गराइएको अदालतमा स्वीकारेका उनलाई जन्म कै’दको फैसला गरिएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीले बताए । अदालतले जन्मकै’दको फैसलासहित रु ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । आ’रोपित उनी आफ्ना सन्तानसहित कावासोतीमा रहेको डीबीआई इँटा उद्योगमा कार्यरत थिए । उद्योगमा श्रीमती, छोरा र छोरीसहित मजदूरी गर्दै आएका उनले छोरीलाई पटक–पटक ब’ला’त्कार गरेको अदालतमा बयान दिएको जनाइएको छ ।
हाडनाता क’रणी गरेका उनको नेपालभर कतै पनि कुनै सम्पत्ति नभएका कारण सरकारी राज्य कोषबाट (पीडित राहतकोष) बाट रु ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने अदालतको फैसला छ । पीडितबाट भ’रण पो’षणको व्यवस्था हुने गरी फैसला आउने भए पनि उनको नेपालभरी कतै कुनै सम्पत्ति नदेखिएका कारण राज्यकोषबाट नगद दिलाउने फैसला भएको अदालतले जनाएको छ ।
मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई कोरोना
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । शनिबार राति ज्वरो आएर पाटन अस्पताल भर्ना भएका मन्त्री पोखरेलको पीसीआर परीक्षण गर्दा आइतबार कोभिड-१९ पोजिटिभ देखिएको उनका स्वकीय सचिव पुरन खड्काले कान्तिपुरलाई बताए । पाटन अस्पतालमै उपचाररत मन्त्री पोखरेलको स्वास्थ्य अवस्थामा केही सुधार भएको खड्काले बताए ।
यसैबीच मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले उनीसँग सम्पर्कमा आएका सबैलाई सतर्क र सुरक्षित हुन आग्रह गरेको छ । शनिबार राति ज्वरो आएर पाटन अस्पताल भर्ना भएका मन्त्री पोखरेलको पीसीआर परीक्षण गर्दा आइतबार कोभिड-१९ पोजिटिभ देखिएको उनका स्वकीय सचिव पुरन खड्काले कान्तिपुरलाई बताए । समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस***
अर्काको श्रीमानसँग रात बिताएपछि यी महिलालाई निबस्त्र सडकमा डुलाइयो ! – हेर्नुहाेस्
३ लाखकै लागि आफ्नै ११ बर्षिय छोरा बन्धक राख्ने बाबुलाइ यहाँहरूले के भन्नुहुन्छ?